facebook.com | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 2
Home Wararka Caalamka facebook.com Page 2
Bujumbuura caasimadda dalka Burundi oo rabshado cusub saaka ku waabariisatey.
Ugu yaraan Toddoba ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen weerar saakay aroortii lagu qaaday saldhgiyo millateri oo ku yaalla duleedka magaalada Bujumbura ee xarunta dalka Burundi. Saaka aroortii hore ayaa waxaa is-rasaaseyn culus laga maqlayay bannaanka Bujumbura, kaddib markii kooxo hubeysan ay weerareen laba saldhig oo ciidamada millateriga dalkaas...
DHalin yaro si isku mid ah loogu diley dalka Mareykanka oo ay marti gelisey magaalada SEATTLE WASHINGTON.
Magaalada Seattle ee Gobolka Washington ee Dalka Mareykanka ayaa todobaadkan siyaabo kala duwan loogu dilay laba Wiil oo Soomaali ah, iyadoo dilalkan ay cabsi ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaas. Mid ka mid ah labada wiil ee Somalida ah ayaa lagu magacaabaa; Xamza Xasan Warsame oo 16-jir ahaa,...
Xildhibaanadii uu hor kacayey Billow Keerow kana soo jeedey G/somaalida Kenya oo xoriyadooda dib u heley.
Ciidamada Booliiska Kenya ayaa gellinkii dambe ee maanta Xabsiga kasii daayay Xildhibaan Billow Kerrow oo laga soo doorto magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi-bari waddanka Kenya, ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Kenya. Xildhibaan Kerrow oo warbaahinta la hadlay markii lasii daayay ayaa sheegay in isaga iyo xildhibaanno kale oo...
Wada hadallo lala galo Bashaar Al-asad oo mucaaradka SYRIA shuruud ku xireen.
Mucaaradka kasoo horjeeda xukuuumadda Suuriya ayaa shir ay ku yeesheen Saudi Arabia waxay kasoo saareen qodobo ay sheegeen in la fuliyo ka hor inta aanay wadahadallo la furin xukuumadda uu hoggaaminayo Bashar Al-Assad. Warbixin ay soo saareen mucaaradka ayay waxay ku baaqeen in waddanka laga sameeyo maamul cusub oo sal-ballaaran,...
Dagaal ba’an ayna ku dhinteen ugu yaraan 11 qof oo ka dhacey magaalada Diinsoor ee G/Baay.
Ugu yaraan 11-qof ayaa ku dhintay, 15-qof oo kalena way ku dhaawacmeen dagaal culus oo ciidamada dowladda Somalia iyo kuwa Al-shabaab ku dhexmaray duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Dadka ku dhintay dagaalkan iyo kuwa ay dhaawacyadu kasoo gaareen ayaa dhamaantood ka tirsanaa dhinacyadii dagaallamay, waxaana dagaalkaan la sheegayaa inuu...
Axmed Cali Daahir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ku baaqey in musuq maasuqa soomaaliya lal dagaalamo.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaran, Dr. Axmed Cali Daahir ayaa ugu baaqay hay’adaha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay si adag ula dagaalamaan musuq-maasuga ragaadiyay dalka, isagoo xusay inay jiri doonaan isbedello, waddankuna uusan kusii jiri doonin marxaladaha hadda jira. Dr. Axmed Cali Daahir ayaa sidoo kale xusay inay la-xisaabtan uu jiri...
Xasan SHeekh Maxauud oo sheegey haddii siyaasada somaaliya aan la hagaajin in aan waxba hagaageyn/hagaajintee shiikhow?.
Madaxweynaha Dowladda Somalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay in siyaasad xumida Somalia haysata ay horseedi karto in la gaari waayo halkii la hiigsanayay oo ah in dib loosoo celliyo kala danbeyntii iyo dowlad-wanaaggii Somalia. Xasan Sheekh ayaa xusay in siyaasad xumada jirta ay sabab u tahay inaan...
Maamul goboleedyada somaliland iyo Puntland oo warbaahinta iska weerarey.
Maamulka Puntland ayaa digniin ka bixisay isku-day ay sheegtay in Somaliland ay ku doonayso inay shidaal uga baarto deegaanka Holhol oo ka tirsan gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland, Axmed Karaash ayaa sheegay hadalkan isagoo dalka Maraykanka ku sugan, wuxuuna xusay in Somaliland ay qaadan doonto cawaaqib-xumada ka dhalata haddii...
Qarax lagu soo xirey gaari kuwa raaxada ah oo lagu diley sarkaal ka tirsanaa hey’adda sirdoonka somalia.
Sarkaal ka tirsanaa hay'adda nabadsugida Qaranka oo lagu magacaabi jiray Maxamed C/llaahi ayaa lagu dilay maanta walxaha qarxa oo loogu xiray gaarigiisa, iyadoo gaariga uu kula qarxay agagaarka isgoyska dabka ee wadada Maka Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho. Gaarigan oo noociisu ahaa Toyoto Carrib ayaa qarxay mar qura, iyadoo markiiba ay...
PAUL KEGAMI;- oo mar sadexaad doorasho u taagan iyo shacabka Rwanda oo afti dastuur laga qaadayo 18ka bishan.
Shacabka Rwanda ayaa Toddobaadka soo socda u codeyn doona isbedelka lagu sameeyay dastuurka waddankaas, kaasoo madaxweyne, Paul Kagame u ogolaanaya inuu mar saddexaad u tartamo hoggaanka Rwanda, sida ay sheegeen mas’uuliyiin ka tirsan xukuumadda Kigali. Isbedelka lagu sameeyay dastuurka Rwanda ayaa wuxuu fursad u siinayaa mar kale inuu xilka hoggaanka...